7Day News >> C Talk
7Day News >> Education
7Day News >> Entertainment
7Day News >> Environment
7Day News >> Health
7Day News >> International
7Day News >> Interview
7Day News >> News
7Day News >> Opinion
7Day News >> Politics
7Day News >> Shopping
BBC Burmese >> Economy
BBC Burmese >> International
BBC Burmese >> Main
BBC Burmese >> Sports
Blog >> Dr. TechX
Blog >> Dr.Lun Swe
Blog >> Hsu Myat Moe
Blog >> JINGHPAW KASA
Blog >> KMT Group
Blog >> Ko Shwe Htoo
Blog >> MoeMyintTane
Blog >> MoeThaGyar
Blog >> Myanmar Historical Blog >> Nine Nine SaNay
Blog >> Saturngod
Burma News International >> Articles
Burma News International >> Interviews
Burma News International >> News
Delo Delo » Articles
Delo Delo » Game
Delo Delo » Handy Crafts
Delo Delo » Horoscope
Delo Delo » Interview
Delo Delo » Lifestyle
Delo Delo » Local
Delo Delo » Photo Album
Delo Delo » Review
Delo Delo » World
DVB Burmese >> Economic
DVB Burmese >> Education
DVB Burmese >> Health
DVB Burmese >> Politics
DVB Burmese >> Social
Eleven Media Group >> Articles
Eleven Media Group >> ASEAN News
Eleven Media Group >> Asia News
Eleven Media Group >> Celebrity Interviews
Eleven Media Group >> General News
Eleven Media Group >> International Business
Eleven Media Group >> International News
Eleven Media Group >> Life
Eleven Media Group >> Local Art News
Eleven Media Group >> Local Business
Eleven Media Group >> Local News
Eleven Media Group >> Mandalay & Other Towns News
Eleven Media Group >> Yangon News
GOV MIF >> Announcement
GOV MIF >> Index
GOV MIF >> Local News
GOV MIF >> Ministry News
GOV MIF >> Other News
Hot News Eleven >> General
Internet Journal >> Education News
Internet Journal >> Electronic News
Internet Journal >> Mobile News
Internet Journal >> Tech News
Irrawaddy >> All News
Irrawaddy >> Articles
Irrawaddy >> Business
Irrawaddy >> Cartoons
Irrawaddy >> Editorial
Irrawaddy >> General
Irrawaddy >> Interviews
Irrawaddy >> Short News
Irrawaddy >> Sports
KTTimes >> Articles
KTTimes >> Interviews
KTTimes >> News
KTTimes >> Opinions
Mandalay Gazette >> Complaint/Claim
Mandalay Gazette >> Myanmar News
Mandalay Gazette >> Opinion & Discussion
Mandalay Gazette >> Press Announcements
Mandalay Gazette >> South East Asia
Mandalay Gazette >> Think Tank
Mandalay Gazette >> US News
Mandalay Gazette >> World News
MaukKha >> Articles
MaukKha >> Asia Society News
MaukKha >> Editorial Articles
MaukKha >> Environmental Science
MaukKha >> International
MaukKha >> Interviews
MaukKha >> Local Education MaukKha >> Mail Box
MaukKha >> Myanmar Education
MaukKha >> News
MaukKha >> Opinion
MaukKha >> Social Science
MaukKha >> Technology
MaukKha >> Video News
MizzimaBurmese >> Breaking News
MizzimaBurmese >> Business
MizzimaBurmese >> Business Article
MizzimaBurmese >> Corruption
MizzimaBurmese >> Local News
MizzimaBurmese >> People Voice
MizzimaBurmese >> Regional News
MizzimaBurmese >> Sad News
MizzimaBurmese >> World News
MizzimaBurmese >> YaTha News
MMAS >> Android Tutorials
MMAS >> iOS Tutorials
MMAS >> Knowledge
MMAS >> Mobile Reviews
MMAS >>Mobile News
MMSY >> Education
MMSY >> General
MMSY >> International
MMSY >> News
MoeMaKa >> Community
MoeMaKa >> Headline News
MTalk.net.mm >> Art
MTalk.net.mm >> Comedy
MTalk.net.mm >> Free Ads
MTalk.net.mm >> International News
MTalk.net.mm >> Knowledge
MTalk.net.mm >> Local News
MTalk.net.mm >> Sports
MTalk.net.mm >> Wishes
Myanmar 1 >> OMG!
Myanmar 1 >> Article
Myanmar 1 >> Entertainment
Myanmar 1 >> Food and cook
Myanmar 1 >> Health and Beauty
Myanmar 1 >> Humor
Myanmar 1 >> Life style
Myanmar 1 >> Local News
Myanmar 1 >> Sport
Myanmar 1 >> Tech
Myanmar 1 >> Women
Myanmar 1 >> World News
Myanmar Celebrities >> Couples
Myanmar Celebrities >> Model Boys
Myanmar Celebrities >> Models
Myanmar Celebrities >> Movie Stars
Myanmar Celebrities >> Music
Myanmar Celebrities >> Singers
Myanmar Celebrities >> Videos
Myanmar Celebrities >> Wallpapers
Myanmar Celebrtites >> Music Videos
Myanmar News Hub » Business
Myanmar News Hub » Entertainment
Myanmar News Hub » Health
Myanmar News Hub » Politics
Myanmar News Hub » Sports
Myanmar News Hub » Technology
Myanmar News Hub » Video
Myanmar News Zone >> Business & Finance
Myanmar News Zone >> Entertainment
Myanmar News Zone >> Fashion
Myanmar News Zone >> Health
Myanmar News Zone >> International
Myanmar News Zone >> Local News
Myanmar News Zone >> Sports
Myanmar News Zone >> Technology
Myanmar Tutorials >> Articles
Myanmar Tutorials >> Interviews
Myanmar Tutorials >> Product Review
Myanmar Tutorials >> Tech News
Myanmar Tutorials >> Tech Review
Myanmar Tutorials » Articles
Myanmar Tutorials » Interviews
Myanmar Tutorials » Product Review
Myanmar Tutorials » Tech News
Myanmar Tutorials » Tech Review
Myanmar Tutorials » Tutorials
Myanmar-Myanmar.Net >> Art
Myanmar-Myanmar.Net >> Business
Myanmar-Myanmar.Net >> Community
Myanmar-Myanmar.Net >> Crime
Myanmar-Myanmar.Net >> Education
Myanmar-Myanmar.Net >> Fashion
Myanmar-Myanmar.Net >> Health
Myanmar-Myanmar.Net >> International
Myanmar-Myanmar.Net >> Local News
Myanmar-Myanmar.Net >> Politics
Myanmar-Myanmar.Net >> Sports
Myanmar-Myanmar.Net >> Technology
Myanmar-Myanmar.Net >> Travel
MyanmarGoal >> Bundesliga Articles
MyanmarGoal >> Bundesliga Interviews
MyanmarGoal >> Bundesliga News
MyanmarGoal >> Bundesliga Results
MyanmarGoal >> Bundesliga Top Scorer
MyanmarGoal >> Champion League
MyanmarGoal >> Euro News
MyanmarGoal >> Europa League
MyanmarGoal >> La LiGa Articles
MyanmarGoal >> La LiGa Interviews
MyanmarGoal >> La LiGa News
MyanmarGoal >> La LiGa Results
MyanmarGoal >> La LiGa Top Scorer
MyanmarGoal >> Myanmar sports News
MyanmarGoal >> Premier Articles
MyanmarGoal >> Premier Interviews
MyanmarGoal >> Premier News
MyanmarGoal >> Premier Results
MyanmarGoal >> Premier Top Scorer
MyanmarGoal >> Series A Articles
MyanmarGoal >> Series A Interviews
MyanmarGoal >> Series A News
MyanmarGoal >> Series A Results
MyanmarGoal >> Series A Top Scorer
MyanmarGoal >> World Sports News
Mystery Zillion >> Discussion
News for People
PatheinCity News >> Article
PatheinCity News >> Business
PatheinCity News >> Entertainment
PatheinCity News >> Fashion
PatheinCity News >> International
PatheinCity News >> Knowledge
PatheinCity News >> Local News
PatheinCity News >> Social
PatheinCity News >> Sport
PatheinCity News >> Technology
Popular Myanmar >> Article
Popular Myanmar >> Education
Popular Myanmar >> Environmental
Popular Myanmar >> Health
Popular Myanmar >> International Art
Popular Myanmar >> International News
Popular Myanmar >> Korea
Popular Myanmar >> Local Art
Popular Myanmar >> Local News
Popular Myanmar >> Movie Video
Popular Myanmar >> Music World
Popular Myanmar >> Politic
Popular Myanmar >> Sports
Popular Myanmar >> Technology
Popular Myanmar >> Transportation
Popular Myanmar >> Travel
Shwe Myanmar Media Group
Tachileik >> News
ThanLwin >> 88 News
ThanLwin >> Articles
ThanLwin >> Business
ThanLwin >> Cartoons
ThanLwin >> Celebrity News
ThanLwin >> General News
ThanLwin >> International
ThanLwin >> Letters
ThanLwin >> News
ThanLwin >> NLD
ThanLwin >> Photo News
ThanLwin >> Special News
ThanLwin >> Technology
The Myanmar Post Global » စီးပွားရေး
The Myanmar Post Global » နည်းပညာ
The Myanmar Post Global » နယ်သတင်း
The Myanmar Post Global » သတင်း
The Myanmar Post Global » အင်တာဗျူး
The Myanmar Post Global » နိုင်ငံရေး
The Voice Weekly >> Business
The Voice Weekly >> Education
The Voice Weekly >> Environment
The Voice Weekly >> Foreign Affairs
The Voice Weekly >> General News
The Voice Weekly >> Health
The Voice Weekly >> IT Technology
The Voice Weekly >> Local News
The Voice Weekly >> Net n Tech
The Voice Weekly >> Perspective
The Voice Weekly >> Politic
The Voice Weekly >> Regional
The Voice Weekly >> Society
The Voice Weekly >> Sports
Thit Htoo Lwin >> Myanmar News
Thit Htoo Lwin >> News
VOA News >> International News
VOA News >> Local News
YOYARLAY >> Book
YOYARLAY >> Business
YOYARLAY >> Entertainment
YOYARLAY >> Health
YOYARLAY >> International News
YOYARLAY >> Kids World
YOYARLAY >> Local News
YOYARLAY >> Science & Tech
YOYARLAY >> Sports
ကာလီဖိုးနီးယားတွင် အက်စစ်ဖြင့်ပက်သူ ဖမ်းဆီးအရေးယူ
04/16/2013 01:43:24 AM
ကာလီဖိုးနီးယားတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အက်စစ်ဖြင့် အပက်ခံရသဖြင့် ဆေးရုံသို့အရေးပေါ်တင်ပို့လိုက် ရပြီး ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကာလီဖိုးနီးယား၊ ဆင် ဒီရာဂိုမြို့တွင် လမ်းလျှောက်လာသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အက်စစ်ဖြင့်ပက်ပြီး အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြင့် လူတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
အာတူရို ရီးယက်စ်ဆိုသူသည် အမျိုးသမီး၏ မျက်နှာနှင့် ကျောကုန်းများကို အက်စစ်ဖြင့်ပက်ပြီးနောက် ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်စဉ်ကို ဓာတ်ဆီရောင်းသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ လျှို့ဝှက်ကင်မရာ မှတ်တမ်းယူ ထားနိုင်သဖြင့် ရဲများကလိုက်ဖမ်းရာ အခြားဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
အာတူရိုသည် အဘယ်ကြောင့် အမျိုးသမီးကို တိုက်ခိုက်ကြောင်း မသိရသော်လည်း အတိုက်ခိုက်ခံရသည့် အမျိုးသမီးမှာမူ ဆေးရုံတွင် ဆာလ်ဖျူရစ် အက်စစ်ဒဏ်ကို အပြင်းအထန် ခံစားနေရသည်ဟုဆိုသည်။
အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော တရားခံ အာတူရိုကို ရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီး ဓာတုဆေးဝါး ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှု၊ အများပြည်သူ ထိတ်လန့်စေရန် လုပ်ဆောင်မှု၊ ရမ်းကားမှု၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို နှောင့်ယှက်မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
ထိုအမှုအတွက် တရားခံသည် တစ်သက်တစ်ကျွန်းထောင်ဒဏ်ကျခံဖွယ်ရာရှိကြောင်းသိရသည်။ မျက်မြင် သက်သေများကလည်း အကြောင်းမဲ့သက်သက်ထွက်လာပြီး ရုတ်တရက် အက်စစ်ဖြင့်ပက်ကာ ထွက်ပြေး သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုကြသည်။ open
ခင်ပွန်းနှင့်ယောက္ခမက ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးကို မကောင်းဆိုးဝါးဟု စွပ်စွဲသတ်ဖြတ်
04/16/2013 01:22:01 AM
ငယ်ရွယ်သည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းခလေးတစ်ဦးကို မကောင်းဆိုးဝါးစီးနေသည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် သတ်ပစ်လိုက်သည့် မိသားစုတစ်စုကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူအပြစ်ပေးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ခင်ပွန်းသည်နှင့် အခြားမိသားစုဝင် သုံးဦးတို့သည် ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရပါက ထောင်ဒဏ် ၅၈ နှစ်အထိ ကျခံရဖွယ်ရှိကြောင်း ရှေ့နေတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
မိသားစုလေးဦးအနက်မှ တစ်ဦးသည် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ နာလီယာ မမ်တက်ဇ်အား လည်ပင်းညှစ်နေချိန် တွင် အခြားသုံးဦးက နာလီယာကို ဖမ်းချုပ်ပေးထားကြသည်။ သူတို့က နာလီယာကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် ဝင်ပူးနေ သည့် မကောင်းဆိုးဝါးကို ထိုနည်းဖြင့် ထွက်သွားစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုကြသည်။
နာလီယာကို သတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသူများထဲတွင် ခင်ပွန်းသည် မိုဟာမက် တူဆစ် မမ်တက်ဇ် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပြီး ဇနီးသည်ကို အသက်ရှူကျပ်ပြီးသေသည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့သူဖြစ်သည်။ အခြား မိသားစုဝင် သုံးဦးမှာ အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ်ဖြစ်သည့် မိဘနှစ်ပါး ဗီယာ အူဟတ်နှင့် ဆလမာ အက်စ်လမ်အပြင် အကိုဖြစ်သူ ဟာမက် ဟတ်စန်တို့လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
တရားရုံးတွင် သုံးလအကြာ အမှုကို ကြားနာခဲ့ရာတွင် နာလီယာကို မိသားစုဝင်အားလုံးက မကြည်ဖြူ မနှစ် သက်ကြကြောင်း၊ ဇနီးသည်ကို မသေမချင်း လည်ပင်းညှစ်သတ်သည်မှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားကြောင်း သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
တရားသူကြီး ကိသ်က တရားခံများကို သေဒဏ်အထိချမှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အဘယ်ကြောင့် သတ်ရကြောင်း ခိုင်လုံသည့် အထောက်အထားများ မရရှိသေးကြောင်း၊ စွဲချက်တင်ရာတွင်လည်း အမှုနောက် ကွယ်တွင် လူသတ်ရန် လှုံ့ဆော်သော မည်သည့်အကြောင်းအချက်များရှိနေကြောင်းကိုလည်း ရှေ့နေများက တင်ပြရန် အားနည်းနေသေးသောကြောင့် အမိန့်ချရန် ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်သည်။
တရားရုံးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုယ်ခန္ဓာ ပိုလီယိုဝေဒနာခံစားရပြီး အကြောဆွဲနေသည့် မမ်တက်ဇ်၏ ထွက်ဆို ချက်ကို ကြားနာရာတွင် သူနှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့သည် ဇာတိဖြစ်သော ပါကစ္စတန်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဇနီးသည် မကွယ်လွန်မီ ၁၄ လအလွန်က လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သူ၏ဇနီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သူတို့၏ ပထမဆုံးကလေး ကိုယ်ဝန် ၆ လကိုလွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ သူတို့မိသားစုသည် ဘာမင်ဟန်မြို့တွင် နေထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဘာမင်ဟန်ဘုရင့်တရားရုံး၏ အမှုရင်ဆိုင်နေခဲ့ရသည်။ အိမ်နီ;ချင်းများ၏ အပြောအရ ကွယ်လွန်သူ နာလီယာသည် ပါကစ္စတန်သို့ ခေတ္တ ပြန်သွားပြီးနောက် ပြန်ရောက်လာသည့်အခါတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိသည်ဟုပြောသဖြင့် သံသယဖြစ်နေကြသည် ဆိုသည့်စကားမှာလည်း စဉ်းစားစရာဖြစ်သည်။
သို့သော် မိသားစုများက နာလီယာတွင် ကိုရမ်ကျမ်းတွင် ပြဆိုထားသည့် မကောင်းဆိုးဝါး ပူးကပ်နေကြောင်း ထို့ကြောင့် ထိုမကောင်းဆိုးဝါးထွက်သွားစေရန် လည်ပင်းညှစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုချက်မှာလည်း လက်ခံနိုင်စရာ မရှိကြောင်း တရားရုံးက သုံးသပ်သည်။
အရှေ့တိုင်းအတွေးအခေါ်များကို မိမိတို့ အနောက်တိုင်း အနေဖြင့် နားလည်ရန်ခက်ခဲကြောင်း၊ သူတို့ နေထိုင် သည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မကောင်းဆိုးဝါးများရှိသည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံမှုများရှိနေသည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း၊ မိသားစုဝင်တစ်ဦးသည် နာလီယာ မကွယ်လွန်မီက မကောင်းဆိုးဝါးများကိုနှင်ထုတ်ရန် အိမ်တွင်း၌ ဆုတောင်း ဝတ်ရွတ်ပွဲများလုပ်ခဲ့သေးကြောင်း ရှေ့နေ ခရစ်တိုဖာ ဟော့တန်ကပြောကြားသည်။ open
လင်မယားချင်းစကားများရာမှ လင်အား မယားကသတ်
04/16/2013 01:01:42 AM
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁၆၁၅-၄-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၀၈၃၀ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာနေ ဆရာဝန်ဖြစ်သူ မထက်ထက်ဝင်း(၃၂)နှစ်သည် နေအိမ်တွင်အရက်မူးပြီး အိမ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအားရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးနေသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရဲဝင်းလတ်(၃၁)နှစ်နှင့် စကားများရန်ဖြစ်စဉ် အိမ်သုံးတူဖြင့်ထုရိုက်ခဲ့သောကြောင့် ရဲဝင်းလတ်တွင် ဦးခေါင်းပြဲကြေမွဒဏ်ရာများရရှိ သေဆုံးသဖြင့် ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံအုပ်ကြီး၊ ဒေါက်တာဇော်မြင့်လွင်က အရေးယူပေးရန်တိုင်တန်းခဲ့သောကြောင့် မထက်ထက်ဝင်းအား ရန်ကင်းရဲစခန်း(ပ)၉၃/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ရဲဇာနည်
သင်္ကြန်သုံးရက်အတွင်း ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် လူသေမှု အများဆုံးဖြစ်
04/16/2013 12:56:56 AM
၂၀၁၃ ခုနှစ် သင်္ကြန်သုံးရက်အတွင်း အပျော်လွန်မှုများကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် လူ ၁၆ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၈၃ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဒီကနေ့ မနက်က ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းမှာ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးရှိတဲ့ အပြင် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၁ ဦးရှိကြောင်းသိရှိရပြီး၊ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် သေဆုံးသူမရှိဘဲ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၀ ဦးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။RFA Burmese
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ တိုးတက်မှုအဖြစ် ၀န်ကြီးကယ်ရီ ရှုမြင်
04/15/2013 11:01:24 PM
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုစက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် (၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၃)
VOA News, 15April 2013 — မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အတူ မြန်မာအစိုးရတို့ လက်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ် အားရကျေနပ်မိတဲ့အကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန် ကယ်ရီ (John Kerry) က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုလောက် ထိန်းသိမ်းခံရာက လွတ်မြောက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ အရင်က စစ်တပ်အရာရှိတွေ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွှတ်တော်တို့ အတူလက်တွဲ လုပ်ကိုင်နေကြတာကို တွေ့ရတဲ့အကြောင်း၊ အာရှ ၃ နိုင်ငံ ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေစဉ် ၀န်ကြီး ကယ်ရီ က ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဦးတည်လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးစဉ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကဆိုရင် စိတ်ကူးယဉ် တွေးကြည့်လို့တောင် မရနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လို့လည်း တိုကျိုစက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ ပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တင်းမာမှုကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေး အဖြေရှာ နိုင်ဖို့အတွက် အာရှဒေသ ၃ နိုင်ငံခရီး သွားရောက်နေရာမှာ နောက်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတာပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံမတိုင်ခင် တောင်ကိုရီးယားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေကို သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အစမှာ တုန်းကတော့ ဒီသီတင်းပတ်ထဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျရောက်တဲ့ အတာသင်္ကြန် ကာလအတွက် ၀န်ကြီး ကယ်ရီ က နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကား ပါးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ New York ကို လာမည်
04/15/2013 10:53:40 PM
VOA News, 15April 2013 — မြန်မာအစိုးရရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့အဖွဲ့ဟာ မကြာခင်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ခ်မြို့မှာ ဒေသခံ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီပွဲကို စီစဉ်သူ ကိုတင်မောင်အေးကို ကိုသားညွန့်ဦး က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။
၀န်ကြီးဦးအောင်မင်း နယူးယောက်ခ်မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမည်
မေး။ ။ ကိုတင်မောင်အေးရေ မကြာခင်မှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နဲ့အဖွဲ့ နယူးယောက်ခ်မြို့ကို လာမယ်။ မြန်မာမိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့လည်း တွေ့ဖို့ ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ ကိုတင်မောင်အေးတို့က စီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့ အစီအစဉ်လေး ပြောပြပါဦးခင်ဗျ။ ဘယ်သူတွေပါ ပါမလဲဆိုတာ။
ဖြေ။ ။ “ဟုတ်ကဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က သူတို့ ကျနော့်ဆီကို ဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော်။ သူတို့ ဒီကိုလာမယ်။ လာပြီးလို့ရှိရင် အချိန်ရတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာ community နဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချင်တယ်ပေ့ါနော်။ အဲ့တော့ ဦးအောင်မင်းနဲ့ ပါလာမယ့်သူတွေက အဓိကကတော့ မြန်မာ peace center က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါလာမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းရယ်၊ နောက်ပြီးတော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး သူတို့ လေးယောက်စလုံးကတော့ community နဲ့ တွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ အခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့မှာ နယူးယောက်ခ်က UN Plaza မှာပဲ ကျနော်တို့ တွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ၁ နာရီကနေ ၄ နာရီအထိပေါ့နော်။”
မေး။ ။ ပထမတကြိမ်တုန်းကလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း လာတုန်းက မြန်မာမိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်လို့ သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီတခေါက်က သူတို့အနေနဲ့ ဘာတွေများ ဆွေးနွေးမယ်လို့ ကြားရပါလဲခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ “ဒီတခေါက်ကတော့ခင်ဗျ ကျနော်သိသလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီအစီအစဉ်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင်လာဖို့ စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်။ သူ့ကို ICG – International Crisis Group ကနေပြီးတော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးသဘောမျိုး၊ ဒီမိုကရေစီ transition ဆုတခုကို ပေးတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအတွက် သမ္မတကိုယ်စား သူတို့က ဒီဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့ လာယူတဲ့သဘောပေါ့နော်။ ဒီတခေါက်မှာတော့ အဓိကကတော့ အတွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကိစ္စတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ အခြေအနေတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေး ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ အထူးသဖြင့်တော့ တိုင်းရင်းသားရေးရာ အခြေအနေတွေပေါ့နော် အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နယူးယောက်ခ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာ community ကို သူတို့က ရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီဘက်ကလည်း မေးချင်တာရှိ ရင်မေး၊ နွေးနွေးထွေးထွေး အပြန်အလှန်ပေါ့ဗျာ ဒီလိုမျိုး အရင်ကအတိုင်းပဲပေါ့
ဆွေးနွေးကြမယ်၊ ဖလှယ်ကြမယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါကို အဓိကထားပြီးတော့ သူတို့ ကျနော့်ဆီ အကူအညီ တောင်းတာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ကလည်း တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ပွဲဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးပါတယ်။”
မေး။ ။ ပထမတခေါက်တုန်းကလည်း မြန်မာ community မြန်မာမိသားစု
တွေနဲ့ အဲ့ဒီမှာ တွေ့ထားတဲ့အခါကျတော့ မြန်မာမိသားစုတွေဘက်က တုံ့ပြန်မှုပေါ့ ပထမအကြိမ်လည်း တွေ့ပြီးပြီ။ သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုတင်မောင်အေး ဘယ်လို ခန့်မှန်းမိသလဲ။
ဖြေ။ ။ “ကျနော့်အမြင်ဆိုရင်တော့ဗျာ သူတို့နှစ်ဘက်ပေါ့ သူတို့အတွင်းထဲကလည်း လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ဘက်က သူတို့အနေနဲ့ကလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်။ လုပ်လည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တုိ့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ဒီဘက်မှာရှိနေကြတဲ့ မြန်မာ community အနေနဲ့ကလည်း အဲ့လိုမျိုး ပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ ဖြစ်စေချင်တာတွေ၊ ဖြစ်သင့်တာတွေကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်စေချင်ကြတာရှိပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်ဆိုရင်တော့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လက်တွေ့မှာ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာ မှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ သူတို့လုပ်နေတဲ့ ဟာတွေနဲ့က နည်းနည်း ကွာဟနေတယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒါလေးကို ကျနော်တို့အနေနဲ့ကလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လူချင်းတွေ့အောင် ကျနော်တို့ စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုး၊ အပြောင်းအလဲတွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာ။ တခါတလေကျတော့လည်း ကျနော်တို့ စိတ်ထဲမှာ မရှင်းတာတွေ၊ သံသယတွေ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံခွင့် မရတာတွေ၊ မရတော့ အတိအကျ အသေအချာ မသိရဘူးပေါ့။ အဲ့ဒါတွေ အများကြီးရှိနေ တယ်ဆိုတော့ သူတို့လာတော့မှ ဒီလို အခွင့်အရေးရတော့မှ ဒီလိုမျိုး ပွဲလေးတွေလုပ်တဲ့အတွက် တဘက်နဲ့တဘက် နားလည်မှု ပိုပြီးတော့ ခိုင်မာလာမယ် တိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တော့ ရှိတာပေါ့နော်။”
မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်တွေ လန်ဒန်ရောက်
04/15/2013 10:49:13 PM
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ဝင်တွေ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး
BBC News, 16April 2013 — ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီဝင် တွေဟာ လန်ဒန်မြို့ကို ရောက်ခိုက် မနေ့တုန်းက ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနကို သွားပြီး သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အဖွဲ့ထဲမှာ ပါတဲ့ ဦးလှမောင်ရွှေကို ဆက်သွယ်ပြီး မြန်မာ Peace Centre အနေနဲ့ ဘယ်အချက်တွေကို အဓိက ထားပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက အရာရှိတွေနဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသလဲလို့ မေးမြန်းကြည့်တော့ မြန်မာ ပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်မှာ ဗြိတိန်ကလည်း ပါဝင်ချင်ပြီး အိုင်ယာလန်နဲ့ ဗြိတိန် ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို ပြန်ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း ၊ မြန်မာ ကိစ္စမှာလည်း စဉ်းစားဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဖိတ်တဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနက လူကြီးတွေကို တွေ့ရတဲ့ အခါ ဦးအောင်မင်းက မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးနိုင်တာတွေကို ပြောပြခဲ့ သလို နိုင်ငံတကာက ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အကူအညီ ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေကို ပြန်ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရခိုင်နဲ့ ကချင် ကိစ္စတွေကိုကော ထည့်သွင်း ပြောပြခဲ့သပါသလားလို့ မေးကြည့်တဲ့ အခါ အဲဒီ ကိစ္စတွေလည်း ပါပြီး တနာရီကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ တိုနီ ဘလဲနဲ့ ဂျော်နသန် ပါးဝါးတို့လည်း မြန်မာ ပြည်က ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း သိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဦးအောင်မင်းက မြန်မာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရပ်တည်ချက် အပြင် လမ်းပြမြေပုံကို ချပြခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သဘောထားတွေကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ဦးလှမောင်ရွှေက ရှင်းပြပါတယ်။
အိုင်ယာလန်နဲ့ ဗြိတိန် ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ တော်တော် ကြိုးစားခဲ့ရပြီး ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အဓိက ပါဝင်ခဲ့သူတွေက အခု ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရှင်းပြခဲ့သလို သူတို့ကလည်း သိချင်တာတွေ မေးလို့ ကိုယ့် အနေအထား ကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့တာကြောင့် ဗြိတိန် ဖက်က အဖွဲ့တွေက ပိုမို သဘောပေါက်ပြီး ကူညီဖို့ စိတ်အားထက်သန်တာ တွေ့ရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တွေဟာ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်ပြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ ၊ သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တို့နဲ့ အတူ မြန်မာ ပိစ် စင်တာက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်ကြောင်း သိရပြီး ဧပြီ ၁၆ရက် ညနေမှာ အိုင်ယာလန်ကို ခရီးဆက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ open
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆက်ကြိုးစားဖို့ လိုသေးကြောင်း ဗြိတိန်အစိုးရ ပြောဆို
04/15/2013 10:47:46 PM
RFA News, 15April 2013 —- မြန်မာအစိုးရသစ်ဟာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ကစပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ တောက်ပြောင်ထင်ရှားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးရလာဒ်တွေ တွေ့မြင်ရသလို၊ တချိန်တည်းမှာလည်း နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေလည်း တွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဗြိတိန်အစိုးရက မနေ့ကပြောဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ဓနသဟာယရုံးက ဧပြီလ ၁၅ ရက် တနင်္လာနေ့နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကဏ္ဍတချို့မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေသလို၊ အားစိုက်ကြိုးပမ်းရဦးမယ့် နယ်ပယ်တွေလည်း အများအပြားရှိနေသေးတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ စာပေစိစစ်ရေးနဲ့ ဆင်ဆာအဖွဲ့ မရှိတော့ပေမယ့် သတင်းမီဒီယာသမားတွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆင်ဆာလုပ်ကြရအောင် စေ့ဆော်ဖန်တီးပေးတဲ့ တခြားပုံစံတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေသေးကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့စည်းခွင့်ရလာပြီး၊ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခွင့်အခြေအနေ တိုးတက်လာတယ်ဆိုနိုင်ပေမယ့် တစ်ဖက်မှာ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံ ဖြေရှင်းနည်းတွေက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေကြောင်း အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့ပြင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂ဝဝ လောက် ထောင်တွေထဲမှာ ရှိနေသေးကြောင်း၊ အစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အားကောင်းမောင်းသန် ဖြစ်လာစေချင်ပေမယ့်၊ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းလောကမှာ ကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းမရှိပဲဖြစ်နေကြောင်း၊ ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လွှတ်တော်ရေးရာစတဲ့ နယ်ပယ်တွေမှာ လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ရရှိလာအောင်ကူညီခဲ့ပြီး ဆက်လက်ကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေ၊ ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံတွေကို စနစ်တကျဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအတွက် အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း ဗြိတိန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ ဓနသဟာယရုံးက ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ open
ဂျပန်တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုတွေ ဒေါ်စုလက်ခံရယူ
04/15/2013 10:26:17 PM
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိစဉ် (၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၃)
VOA News, 15April 2013 — မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို ထိခိုက်စေမယ့် ဥပဒေတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ရမယ်လို့ ကျိုတိုမှာ မြန်မာ မိသားစု တွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ကို ၆ ရက်ကြာ ခရီးသွားရောက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တနင်္လာနေ့မှာ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခဘွဲ့ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုစနစ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သလို၊ ကျိုတိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက် က တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်စု ဂျပန်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြော
ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအကြား ဆက်နွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အတွင်း သုတေသနစာတမ်းရေးခဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ပေးအပ်ခဲ့သလို၊ နောက် တက္ကသိုလ်တခုဖြစ်တဲ့ Ryokoku တက္ကသိုလ်ကလည်း ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်နှစ်ခုစလုံးမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုစနစ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံကို ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ကိုမျိုးသီဟန် က ပြောပါတယ်။
“Kyoto University မှာ သူ Seminar ပေးပါတယ်။ Seminar ခေါင်းစဉ်ရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူမှုရေး စနစ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေက ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို အန်တီက ပြောသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Kyoto University ကို ၀င်ခွင့်မရပါဘူး။ ဒီက တီဗွီကကြည့်တယ်။ သတင်းက ထိုင်ကြည့်ပါတယ်။ အဲ Ryukoku University မှာက ဒီကျိုတိုမှာလာတဲ့ အန်တီရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်၊ အန်တီ Oxford မှာသိခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူတို့က အရင်က ဒီကျောင်းမှာ ပါမောက္ခ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကျောင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြေခံထားတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အန်တီရော၊ အန်တီ့အမျိုးသားရော ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာထားတာတွေ ဒီမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီကျောင်းနဲ့ သူတို့ ဟိုအရင်ကတည်းက အဆက်အသွယ်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့က အန်တီရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခအဖြစ် သူတို့ ဒီကနေ့ ပေးပါတယ်။”
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမှုရေး အသွင်ပြောင်းလဲမှုကနေ နိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေစီရေးအသွင် ပြောင်းလဲလာစေဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းပြီး ကူညီပံ့ပိုးကြဖို့ အတွက်ကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပန်ကြားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်နဲ့ ရိုကိုကုတက္ကသိုလ်တွေကို မသွားရောက်ခင် မနက်ခင်းမှာတော့ ကျိုတိုမြို့ ၀န်းကျင်တ၀ိုက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရော၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲက နိုင်ငံမဲ့နေသူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုအပေါ်မှာ ထိခိုက်စေမယ့် ဥပဒေတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဒီတည်ဆဲဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့သူ အားလုံးကို နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ အမြန်ဆုံး အသိအမှတ် ပြုရမယ်။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နိုင်ငံသား အားလုံးဟာ တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေး ရှိရမယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ကျမတို့ လောလောဆယ် လုပ်ကြရမယ်။ နောက်တဆင့်က ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံသား ဥပဒေဟာ မျှတသလား၊ မမျှတဘူးလား ဆိုတာ ကျမတို့ ကြည့်ရမယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ အဆင့်အတန်းအရ အဆင့်မှီရဲ့လား။ အဲ့ဒါကို ကျမတို့ သုံးသပ်ရမယ်။ သုံးသပ်ပြီးတော့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရမယ်။ ဖြည့်ဆည်းရမယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဆွဲတဲ့သဘောမျိုးတွေ ပါနေတာတွေ့ရတာမို့ ဒါမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာနဲ့ အင်မတန်မှ ပတ်သက်နေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုတာဟာ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှ မရေးဆွဲရဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို ကာကွယ်ချင်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို ကန့်သတ်ထားချင်လို့ပဲဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲတယ် ဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ မသင့်တော်တဲ့ ကိစ္စပါ။”
ဒါ့အပြင် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ကိုယ်က လေးစားမှ တခြားနိုင်ငံသားတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို လေးစားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီကိစ္စဟာ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုမျိုးသီဟန် က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ မနက်ဘက်မှာ Kyoto University မှာရှိတဲ့ စင်တာမှာ မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာတော့ သူဖြေကြားသွားတာတွေက အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ ဥပဒေရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ နောက် လက်ရှိ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ နေနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖြေသွားပါတယ်။ နောက်တော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအတွက်၊ ပညာရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ရေးအတွက်ကို သူအမျုားဆုံး ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ ဒီကျွန်တော်တို့ ဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့ မိသားစုတွေ မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲမှာ ပညာရေး မေးခွန်းက များပါတယ်။”
ညနေ ၄ နာရီခွဲလောက်မှာတော့ ကျိုတိုကနေ ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ခြမ်းက တိုကျိုဘက်ကို ရထားနဲ့ ပြန်သွားခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Katsuragawa မြစ်မကြီးကနေ ပထမဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ယူတဲ့စနစ်ကို လေ့လာဖို့အတွက် ဒေသတွင်း အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ် စက်ရုံကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့မှာတော့ တိုကျိုမှာ ဂျပန် Diet လွှတ်တော်ကို သွားရောက်ဖို့ရှိသလို၊ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖုမီယို ကီရှိဒါ (Fumio Kishida) နဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို မပြန်ခင်မှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေး (Shinzo Abe) နဲ့လည်း တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်တွေ လန်ဒန်ရောက်
04/15/2013 09:35:52 PM
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီဝင် တွေဟာ လန်ဒန်မြို့ကို ရောက် ခိုက် မနေ့တုန်းက ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနကို သွားပြီး သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အဖွဲ့ထဲမှာ ပါတဲ့ ဦးလှမောင်ရွှေကို ဆက်သွယ်ပြီး မြန်မာ Peace Centre အနေနဲ့ ဘယ်အချက်တွေကို အဓိက ထားပြီး ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက အရာရှိတွေနဲ့ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသလဲလို့ မေးမြန်းကြည့်တော့ မြန်မာ ပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်မှာ ဗြိတိန်ကလည်း ပါဝင်ချင်ပြီး အိုင်ယာလန်နဲ့ ဗြိတိန် ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို ပြန်ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း ၊ မြန်မာ ကိစ္စမှာလည်း စဉ်းစားဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဖိတ်တဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရခိုင်နဲ့ ကချင် ကိစ္စတွေကိုကော ထည့်သွင်း ပြောပြခဲ့သပါသလားလို့ မေးကြည့်တဲ့ အခါ အဲဒီ ကိစ္စတွေလည်း ပါပြီး တနာရီကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ တိုနီ ဘလဲနဲ့ ဂျော်နသန် ပါးဝါးတို့လည်း မြန်မာ ပြည်က ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း သိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိုင်ယာလန်နဲ့ ဗြိတိန် ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ တော်တော် ကြိုးစားခဲ့ရပြီး ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အဓိက ပါဝင်ခဲ့သူတွေက အခု ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရှင်းပြခဲ့သလို သူတို့ကလည်း သိချင်တာတွေ မေးလို့ ကိုယ့် အနေအထား ကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့တာကြောင့် ဗြိတိန် ဖက်က အဖွဲ့တွေက ပိုမို သဘောပေါက်ပြီး ကူညီဖို့ စိတ်အားထက်သန်တာ တွေ့ရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တွေဟာ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်ပြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ ၊ သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး တို့နဲ့ အတူ မြန်မာ ပိစ် စင်တာက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်ကြောင်း သိရပြီး ဧပြီ ၁၆ရက် ညနေမှာ အိုင်ယာလန်ကို ခရီးဆက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း)ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ဝင်တွေhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
04/15/2013 09:27:55 PM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျား/မ ခွဲခြား ဆက်ဆံပုံဟာ ဂျပန်မှာလောက် မဆိုးဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုမြို့ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အပါအဝင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ၅ဝဝ ကျော်နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အသွင်အကူးအပြောင်းမှာ“မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျား/မခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမရှိပဲ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆနေတဲ့သူတွေ အများအပြားရှိပါတယ်၊ အဲဒါမမှန်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျား/မခွဲခြားမှုဟာ ဒီနိုင်ငံမှာလောက်တော့ မကြီးမားလှပါဘူး၊ သုတေသနနဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ လိင်ခွဲခြားမှု အတော်လေးမြင့်မားနေတယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွှတ်တော်အမတ်ပေါင်း ၆၆၄ ယောက်ရှိရာမှာ အမျိုးသမီးအမတ် အလွန်နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အမတ်နေရာ ၄၅ နေရာမှာ NLD ပါတီက ၄၃ နေရာ အရွေးခံခဲ့ရရာမှာ အမျိုးသမီး ၁၃ ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကျား/မ လိင်ခွဲခြားမှု ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းသွားအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့၊ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားထက်တော့ အခြေအနေပိုကောင်းပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။စီးပွားရေးကောင်းလာလေလေ လိင်ခွဲခြားမှု ကျဉ်းမြောင်းလာလေလေဆိုတဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ရဲ့အဆိုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်မခံပါဘူး။ လိင်ခွဲခြားမှုဟာ စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်အကြောင်းခံတယ်ဆိုရင် ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှာ လိင်ခွဲခြားမှု ဘာကြောင့်အကြီးမားဆုံး ဖြစ်နေရတာပါလဲ၊ ဒီကိစ္စဟာ စီးပွားရေးကြောင့်မျှသာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လူမှုရေးတန်ဖိုးထားပုံတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။RFA Burmese
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
04/15/2013 09:26:46 PM
ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာ မတူတဲ့ သဘောထားအမြင်တွေ ကို လေးစားလက်ခံတဲ့စနစ် ဖြစ်တာကြောင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းက မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေကို လက်ခံနိုင်ပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာအောင် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုမြို့မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား မိသားစုတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။"မတူတဲ့အမြင်တွေညှိယူနိုင်မှ ကျမတို့ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်၊ လူသားတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြဘူး၊ တွေးခေါ်ပုံ မတူကြဘူး၊ ဒီလိုမတူတဲ့ကိစ္စတွေကို ညှိနိုင်တယ်၊ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ ပြေပြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်အရ ကျမတို့ဟာ နိုင်ငံရေးစနစ်ပေါင်း မြောက်များစွာထဲမှာ ဒီစနစ်ကိုရွေးတာပါ၊ ဒါကြောင့် ဒီစနစ်ဟာ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ သူလဲ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်"ဒါ့အပြင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ အပေးအယူလုပ်ပြီး အဖြေရှာတဲ့ယဉ်ကျေးမှု အားနည်းနေတာကို တွေ့ရကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပဋိပက္ခတွေဖြေရှင်းရမှာကို ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုကြောင်း၊ ဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်း မှန်ကန်ဖို့သာ အရေးကြီးကြောင်း၊ ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ ဖြေရှင်းပုံမမှန်ကန်ရင် ရှုံးနိမ့်သူက သိက္ခာရှိရှိနဲ့ရှုံးခဲ့ရင် နိုင်သလိုတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသူဘဝက နေထိုင်ခဲ့တဲ့အဆောင်ကိုလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအဆောင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေထိုင်ခဲ့တဲ့အခန်းကို ကျိုတိုတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နာမည်ပေးပြီး ဂုဏ်ပြုမှည့်ခေါ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။RFA Burmese
04/15/2013 09:24:13 PM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို ထိခိုက်စေမယ့် ဥပဒေတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ရမယ်လို့ ကျိုတိုမှာ မြန်မာ မိသားစု တွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ကို ၆ ရက်ကြာ ခရီးသွားရောက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တနင်္လာနေ့မှာ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခဘွဲ့ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုစနစ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သလို၊ ကျိုတိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဒေါ်ခင်မျိုးသက် က တင်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအကြား ဆက်နွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အတွင်း သုတေသနစာတမ်းရေးခဲ့သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ပေးအပ်ခဲ့သလို၊ နောက် တက္ကသိုလ်တခုဖြစ်တဲ့ Ryokoku တက္ကသိုလ်ကလည်း ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်နှစ်ခုစလုံးမှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုစနစ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါပုံကို ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ကိုမျိုးသီဟန် က ပြောပါတယ်။“Kyoto University မှာ သူ Seminar ပေးပါတယ်။ Seminar ခေါင်းစဉ်ရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူမှုရေး စနစ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေက ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို အန်တီက ပြောသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Kyoto University ကို ၀င်ခွင့်မရပါဘူး။ ဒီက တီဗွီကကြည့်တယ်။ သတင်းက ထိုင်ကြည့်ပါတယ်။ အဲ Ryukoku University မှာက ဒီကျိုတိုမှာလာတဲ့ အန်တီရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်၊ အန်တီ Oxford မှာသိခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူတို့က အရင်က ဒီကျောင်းမှာ ပါမောက္ခ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကျောင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြေခံထားတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အန်တီရော၊ အန်တီ့အမျိုးသားရော ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာထားတာတွေ ဒီမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီကျောင်းနဲ့ သူတို့ ဟိုအရင်ကတည်းက အဆက်အသွယ်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့က အန်တီရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခအဖြစ် သူတို့ ဒီကနေ့ ပေးပါတယ်။”တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမှုရေး အသွင်ပြောင်းလဲမှုကနေ နိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေစီရေးအသွင် ပြောင်းလဲလာစေဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းပြီး ကူညီပံ့ပိုးကြဖို့ အတွက်ကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပန်ကြားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်နဲ့ ရိုကိုကုတက္ကသိုလ်တွေကို မသွားရောက်ခင် မနက်ခင်းမှာတော့ ကျိုတိုမြို့ ၀န်းကျင်တ၀ိုက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရော၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲက နိုင်ငံမဲ့နေသူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုအပေါ်မှာ ထိခိုက်စေမယ့် ဥပဒေတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။“ဒီတည်ဆဲဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့သူ အားလုံးကို နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ အမြန်ဆုံး အသိအမှတ် ပြုရမယ်။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နိုင်ငံသား အားလုံးဟာ တန်းတူညီမျှမှု အခွင့်အရေး ရှိရမယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ကျမတို့ လောလောဆယ် လုပ်ကြရမယ်။ နောက်တဆင့်က ကျမတို့ရဲ့ နိုင်ငံသား ဥပဒေဟာ မျှတသလား၊ မမျှတဘူးလား ဆိုတာ ကျမတို့ ကြည့်ရမယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ အဆင့်အတန်းအရ အဆင့်မှီရဲ့လား။ အဲ့ဒါကို ကျမတို့ သုံးသပ်ရမယ်။ သုံးသပ်ပြီးတော့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရမယ်။ ဖြည့်ဆည်းရမယ်။”မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဆွဲတဲ့သဘောမျိုးတွေ ပါနေတာတွေ့ရတာမို့ ဒါမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။“နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ကံကြမ္မာနဲ့ အင်မတန်မှ ပတ်သက်နေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုတာဟာ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှ မရေးဆွဲရဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို ကာကွယ်ချင်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ကို ကန့်သတ်ထားချင်လို့ပဲဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ရေးဆွဲတယ် ဆိုတာဟာ အင်မတန်မှ မသင့်တော်တဲ့ ကိစ္စပါ။”ဒါ့အပြင် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ကိုယ်က လေးစားမှ တခြားနိုင်ငံသားတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို လေးစားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီကိစ္စဟာ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုမျိုးသီဟန် က အခုလို ပြောပါတယ်။“ကျွန်တော်တို့ မနက်ဘက်မှာ Kyoto University မှာရှိတဲ့ စင်တာမှာ မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ်မှာတော့ သူဖြေကြားသွားတာတွေက အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ ဥပဒေရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့၊ နောက် လက်ရှိ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ နေနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖြေသွားပါတယ်။ နောက်တော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအတွက်၊ ပညာရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ရေးအတွက်ကို သူအမျုားဆုံး ဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ ဒီကျွန်တော်တို့ ဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့ မိသားစုတွေ မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲမှာ ပညာရေး မေးခွန်းက များပါတယ်။”ညနေ ၄ နာရီခွဲလောက်မှာတော့ ကျိုတိုကနေ ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ခြမ်းက တိုကျိုဘက်ကို ရထားနဲ့ ပြန်သွားခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Katsuragawa မြစ်မကြီးကနေ ပထမဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်ယူတဲ့စနစ်ကို လေ့လာဖို့အတွက် ဒေသတွင်း အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ် စက်ရုံကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့ တိုကျိုမှာ ဂျပန် Diet လွှတ်တော်ကို သွားရောက်ဖို့ရှိသလို၊ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖုမီယို ကီရှိဒါ (Fumio Kishida) နဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို မပြန်ခင်မှာ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇို အာဘေး (Shinzo Abe) နဲ့လည်း တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ခင်မျိုးသက် (ဗွီအိုအေ)
မြန်မာ့ပညာရေး ၀ိုင်းဝန်းမြှင့်တင်ကြဖို့ ဒေါ်စုတိုက်တွန်း
04/15/2013 09:17:54 PM
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပညာရေး စနစ် ပြန်လည် အားကောင်း ခိုင်မာလာဖို့ ငွေအားရော လူအားပါ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြဖို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေး စနစ်ဟာ စဉ်းစား တွေးခေါ်မှုကို အားမပေး တာကြောင့်၊ ပညာရေးစနစ် ကျဆင်းလာရတယ်လို့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ ပြောတဲ့ မနေ့တုန်းက မိန့်ခွန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကိုသားညွန့်ဦး တင်ပြထားပါတယ်။
မနေ့တုန်းက တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ ဂျပန်ရောက် မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲ အတွင်း မြန်မာလူမျိုးတွေ မေးမြန်းချက်တွေကို ဖြေကြားရာမှာ အကြောင်းအရာ အတော်များများက ပညာရေးကိစ္စနဲ့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပညာရေးစနစ် ကျဆင်းနေတာဟာ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကို အားမပေးတဲ့ စနစ်ကြောင့်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ရှိ ပညာရေး သင်ကြားမှုစနစ်ကို အပြစ်တင်ပါတယ်။
“ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ပညာရေးစနစ်ဟာ ကျဆင်းနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ အကြောင်းတွေကတော့ အများကြီးရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးစုပုံပြီးတော့ အကြောင်းတကြောင်းတည်း ပေးရမယ် ဆိုရင်တော့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မစဉ်းစားစေချင်တဲ့ စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တာလုိ့ ဒီလိုပဲ ကျမ ထင်ပါတယ်။ ပညာသင်လိုက်ပြီ၊ ပညာတတ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားချင်တယ်။ ကိုယ့်ဦးနှောက်ကို ကိုယ် အသုံးချချင်တယ်။ ကိုယ့်အဖြေကိုယ် ရှာချင်တယ်။ ဒီလို ပြည်သူပြည်သားများမှာ ကိုယ့်ဦးနှောက်ကိုယ်သုံးပြီးတော့ ကိုယ့်အမြင်တွေ၊ ကိုယ့်အဖြေကိုယ်ရှာတဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မျိုးဆိုတာ ဘယ်အာဏာရှင်အစိုးရကမှ မနှစ်သက်ပါဘူး။ အာဏာရှင်အစိုးရများဟာ မိမိတို့ရဲ့ အလိုဆန္ဒအတိုင်းသာ ပြည်သူပြည်သားတွေကို လိုက်ပြီး စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင် ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ် ကျဆင်းရတဲ့ အကြောင်းအရင်း တခုတည်းကို ပြောပါဆိုရင် ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို မစဉ်းစားတတ်အောင်လို့ ဦးတည်တဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြောင့်လို့ ကျမ ပြောရပါမယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ် ပြင်ဆင်စရာတွေ အများကြီးလိုအပ်နေပြီး၊ အခြေခံပညာရေးနဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေ ပျိုးထောင်လေ့ကျင်ရေး အရေးပါမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
တချိန်တုန်းက ဒေသတွင်းမှာ ဂုဏ်သတင်းကျော်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကို ပြန်လည် မွန်းမံရေးနဲ့ အဆင့်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိနေပြီးတော့၊ ဒီအတွက် ငွေအားရော လူအားပါ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေက ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။
အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပညာရေးကော်မတီအနေနဲ့လည်း ဒီမူဝါဒကို အခြေခံပြီး ရပ်တည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“အဓိကအားဖြင့် ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ စဉ်းစားတတ်အောင်လို့ အတွေးအခေါ် ဖွံ့ဖြိုးအောင်လို့ အဆင့်မြင့် ပညာရနိုင်ဖို့ ဒါကို ကျမတို့ ဒီကို ဦးတည်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ သုံးတဲ့ ဗျူဟာတွေကတော့ အခြေအနေအရ၊ အချိန်အခါအရ ပြောင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ ကျမတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က စပြီးတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဒီမိုကရေစီ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတခု ထူထောင်ရေးကို ကျမတို့ အဓိကထားခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတခုတည်းနဲ့တင် မလုံလောက်ပါဘူး။ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကကိုက ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းစံထားတွေကို လက်ခံပြီးတော့ အမြစ်တွယ်အောင်လုပ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာလည်း အမြစ်တွယ်မှာ ခိုင်ခံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။”
တခြားအခြေအနေတွေကတော့ ပြည်ပမှာ နှစ်ရှည်လများ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ကိစ္စတွေကို မေးမြန်းတာတွေ ပြန်လည်ဖြေကြား ဆွေးနွေးခဲ့သလို၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းက ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်စရာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောသွားပါတယ်။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး မရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်ကမှ သိပ်ပြီးတော့ လိုလိုလားလားနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲ ဥပဒေတွေက ကောင်းကောင်း၊ ဥပဒေတွေရှိတဲ့ စာရွက်ပေါ်မှာတော့ ကောင်းမှာပေါ့။ ဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး မရှိလို့ရှိရင် ဘာမှ စိတ်ချနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာမှ လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ အဲ့လိုဆိုရင်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး မရှိတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင် ခဏတဖြုတ်လာပြီးတော့ အလွယ် အမြတ်ကလေး ခပ်မြန်မြန်လေး ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ ခပ်မြန်မြန်လေး ထွက်သွားမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မျိုးပဲ လာပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲပဲ။ တချို့က ကျမနားလည်သလောက်တော့ အုပ်ချုပ်ရေးဘက်က တချို့ လူကြီးတွေဆိုရင် လာတယ်၊ လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုပြီး စကားပဲ ပြောပြီး လာပဲကြည့်ပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ မမြှုပ်နှံတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို အပြစ်ပြောချင်တယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ရမယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဘာလိုအပ်နေသလဲ။ စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတာ အကျိုးအမြတ်ရှိမှ လုပ်မှာပေါ့။”
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို ထိခိုက်စေမယ့် ဥပဒေတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ရမယ်လို့ ကျိုတိုမှာ မြန်မာ မိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို၊ ဂျပန်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဂျပန်ကို ၆ ရက်ကြာခရီး သွားရောက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနေ့က ကျိုတိုတက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့ကို လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး (ဗွီအိုအေ)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ရောက် မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် (၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၃)http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
Boston Marathon ဗုံးပေါက်ကွဲမှု လူ ၃ ဦးသေ ၁၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရ
04/15/2013 09:14:41 PM
Boston မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပစဉ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ် (၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၃)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Massachusetts ပြည်နယ် Boston မြို့မှာ ဗုံးနှစ်လုံးကွဲတာကြောင့် လူသုံးဦး သေဆုံးပြီး၊ လူ ၁၀၀ ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲ ၁၇ ဦးကတော့ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ လုပ်နေရာမှာ ပန်းဝင်မယ့် လိုင်းအနီးမှာ ပေါက်ကွဲ သွားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီနောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Boston မြို့ John F Kennedy စာကြည်တိုက်မှာလည်း နောက်ထပ် တတိယဗုံး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ အထိအခိုက် အသေအပျောက် ရှိ မရှိ မသိရပါဘူး။ ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ် သက်လို့ သမ္မတ အိုဘားမား က အမေရိကန် ၀ါရှင်တန်စံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီက မိန့်ခွန်းတို ထွက်ပြောရာမှာတော့ - ပေါက်ကွဲမှုကို ဘယ်သူလုပ်တယ်၊ ဘာကြောင့် လုပ်တယ်ဆိုတာကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး၊ အခုအချိန်အထိတော့ ဘယ်သူ့လက်ချက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။Boston ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက် သမ္မတ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်Boston ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက် သမ္မတ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်တာဝန်ရှိတဲ့ တဦးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဖွဲ့အစည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရှာဖွေဖော်ထုတ် အရေးယူသွားမယ်လို့ သမ္မတ အိုဘားမား က ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ စနစ်တကျ ကြိုတင်စီမံလုပ်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်တယ်လို့ Massachusetts ပြည်နယ် အောက်လွှတ်တော်အမတ်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဲဘက်ကတော့ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာ အသေးစိတ် အခြေအနေတွေကို စစ်ဆေးဆဲရှိပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းတွေမှာတော့ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်သွားတဲ့ပုံတွေ၊ နောက်ပိုင်း အပျက်အစီးတွေနဲ့ သွေးအစအနတွေ ထိခိုက်သူတွေကို မြင်ရပါတယ်။ ပေါက်ကွဲ မှုဖြစ်ချိန် မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်သူပေါင်း ၂ သောင်း ၇ ထောင်လောက်ရှိပြီး၊ ပထမဆုံး မာရသွန် အပြေးသမားက ပန်းဝင်လိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပေါက် ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ပြိုင်ပွဲကို ရပ်လိုက်ရပါတယ်။ Boston မှာ လုံခြုံရေးတွေ ခရီးသွားလာရေးတွေကို တင်းကြပ်လိုက်တဲ့အပြင်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြားမြို့ကြီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မြို့တော် Washington D.C.၊ New York၊ Los Angeles၊ San Francisco မြို့တွေမှာလည်း လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကို တိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဗွီအိုအေ(မြန်မာဌာန)http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက် မြန်မာတွေရဲ့ သံချပ် (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 09:12:12 PM
အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေ နှစ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်နေ တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ သံချပ် အစီအစဉ်ကို ထုတ်လွှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ထွက်ပေါက်မရှာ၊ ဖောက်ထွက် ပါလော့" လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ သံချပ်အစီအစဉ်မှာ ဒီကနေ့ ... မြန်မာနိုင်ငံက မြေသိမ်းယာသိမ်း ကိစ္စတွေနဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျနေတဲ့ အကြောင်း သရော်ထားတဲ့ သံချပ်တွေကို စပ်ဆိုထားပါတယ်။ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ဘော်စတွန် မာရသွန်ပြေးပွဲမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ
04/15/2013 08:34:12 PM
တီဗွီမှာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေပြနေတာ ကြည့်နေတုန်း ဗုံးကွဲတဲ့ သတင်းလာနေတယ် အသိတစ်ယောက်ပြောလို့ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဖြစ်ပြန်ပြီလားလို့ အရမ်းစိတ်ပူသွားတာ… နောက်မှ ဘော်စတွန်မှာတဲ့.. ဒါနဲ့ အပြေးအလွှား အွန်လိုင်းမှာရှာကြည့်ရတယ် UPDATE[6:00PM EST]: 12 confirmed dead. 50 confirmed injured. 10 require amputation. The suspect is identified asaSaudi man who’s injured and under heavy guard in the hospital. For images and animations of the explosion, with more news, visit: http://www.nypost.com/p/news/national… ဘော်စတွန်မာရသွန် [...] open
ဗငျနီဇှဲလား ရှေးကောကျပှဲ ယာယီ သမ်မတ အနိုငျရကွောငျး ကွညော
04/15/2013 06:28:27 PM
ရှေးကောကျပှဲ ရလဒျကို ဆနျ့ကငျြ ဆန်ဒပွမှုတှေ ရှိနပေမေယျ့ အနိုငျရသူကို ကွညော open
မွနျမာ ငွိမျးခမျြးရေး အဖှဲ့ဝငျတှေ လနျဒနျရောကျ
04/15/2013 06:18:14 PM
မွနျမာ့ ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျမှာ ဗွိတိနျကလညျး ပါဝငျခငျြတယျလို့ ဆို open
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဟာ လူ့ အခွင့် အရေးကို အခြေခံတယ်လို့ ဒေါ်စုပြော
04/15/2013 05:51:36 PM
ဂျပန် နိုင်ငံမှာ ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုး သမီးတွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပိုမို ပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်။တနင်္လာနေ့က ကျိုတို တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသား တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့စဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ တက္ကသိုလ်ဟာ လွန်ခဲတဲ့ ၂၇ နှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သုတေသီ တစ်ဦး အဖြစ် ပညာ ဆည်းပူး လေ့လာခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကျိုတိုမြို့ မှာပဲ ယူကိုကု တက္ကသိုလ် ကလည်း သူ့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခ အဖြစ် အပ်နှင်း တဲ့ အခမ်း အနားကို တနင်္လာ နေ့မှာပဲ ကျင်းပခဲ့ ရာမှာ လူ ၅၀၀ လောက် တက်ရောက် ခဲ့ကြ ပါတယ်။အဲဒီ တက္ကသိုလ်ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးတဲ့ တက္ကသိုလ် ဖြစ်တာကြောင့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောခဲ့တယ်လို့ အခမ်း အနား တက်ဖို့ ဖိတ်ကြား ခံခဲ့ရသူ အိုဆာကာ စီတီ တက္ကသိုလ်မှာ နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့် အရေး ဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့ အတွက် ကျမ်းပြုစု နေတဲ့ ကိုအောင်မြတ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တွေက ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဘယ်လို နားလည် သလဲလို့ မေးခဲ့ ကြတာကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာ ဖြစ်ပြီး လူ့ အခွင့် အရေးကို အခြေခံတဲ့ ဘာသာတရား ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြန်လည် ဖြေခဲ့တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။တက္ကသိုလ် နှစ်ခုကို မသွားခင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ကျိုတိုမှာ မြန်မာ မိသားစု တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို မပြင်ဘူး ဆိုရင် လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ မျှတမှု တော့ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မေးမြန်းမှုတွေ အခြေခံပြီး အဲဒီ တွေ့ဆုံမှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ကြောင်း League for Democracy in Burma အဖွဲ့ရဲ့ အိုဆာကာ မြို့ ဌာနခွဲက ဦးခင်ဇော်က ပြောပါတယ်။ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း)ယူကိုကု တက္ကသိုလ် ကျောင်းသာတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုကြhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
ဘော့စတွန် မာရသွန် ပေါက်ကွဲမှု ၂ယောက်သေ ၂၃ယောက် ဒဏ်ရာရ
04/15/2013 05:46:11 PM
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၂ယောက် သေဆုံးပြီး ၂၃ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။မပေါက်ကွဲ သေးတဲ့ ဗုံးနှစ်လုံးကိုလည်း ရဲက တွေ့ရှိခဲ့ပြီး စနက်တန် ဖြုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီမာရသွန် ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စာရင်းသွင်းသူ ၂၅၀၀၀ လောက်ရှိပြီး ယူကေက ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်သူ ၃၇၄ ယောက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒေသ စံတော်ချိန် နေ့လည် ၂ နာရီ ၅၀ မိနစ်မှာ ဆက်တိုက် ဆိုသလို ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။လတ်တလောတော့ ဂျေအက်ဖ်ကေ စာကြည့်တိုက်မှာ တတိယမြောက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘော်စတွန် မြို့သူမြို့သားတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်အဆောက်အဦ အတွင်းမှာဘဲ နေထိုင်ပြီး တက်နိုင်ရင် အပြင် မထွက်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း)ဒဏ်ရာရသူတွေ ၂၃ ယောက် ရှိတယ်လို့ဆိုhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
ဘော့စတှနျ မာရသှနျ ပေါကျကှဲမှု ၂ယောကျသေ အမြားအပွား ဒဏျရာရ
04/15/2013 02:04:43 PM
မပေါကျကှဲသေးတဲ့ ဗုံးနှဈလုံး ရဲက ထပျတှလေို့ စနကျတနျ ဖွုတျခဲ့ရ open
ထိုငျး ကမ်ဘောဒီးယား နယျခွားကိစ်စ ကုလမှာ ကွားနာ
04/15/2013 10:34:17 AM
နှဈနိုငျငံ နယျစပျက နှဈပေါငျး ၁၀၀၀ ကြျော ကွာမွငျ့ပွီ ဖွဈတဲ့ ရှေးဟောငျး ဘုရားကြောငျး ဘေးက နယျမွေ ပိုငျဆိုငျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ကွားနားတာ ဖွဈ။ open
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ် အဖွဲ့အပိုင်း ( ၃ ) (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 10:14:07 AM
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ် အဖွဲ့ သားတွေရဲ့သံချပ် ရိုက်ကူးရေးကို ၇ ရက် နဲ ၈ ရက်မှာ နာရေး ကူညီမှုအသင်း - ရန်ုကုန် ခန်းမဆောင်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင် ဒီဥက္ကာ နဲ့ဒါရိုက်တာ ၀င်းကျော့မှုးတို့ဦးစီးရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ် အဖွဲ့အပိုင်း ( ၂ ) (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 10:09:29 AM
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ် အဖွဲ့ သားတွေရဲ့သံချပ် ရိုက်ကူးရေးကို ၇ ရက် နဲ ၈ ရက်မှာ နာရေး ကူညီမှုအသင်း - ရန်ုကုန် ခန်းမဆောင်မှာ - အသင်းခေါင်းဆောင် ဒီဥက္ကာ နဲ့ဒါရိုက်တာ ၀င်းကျော့မှုးတို့ဦးစီးရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ် အဖွဲ့အပိုင်း ( ၁ ) (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 09:59:44 AM
မောင်မောင်ဆိုလေ ထီးရိုးရှည် သံချပ် အဖွဲ့ သားတွေရဲ့သံချပ် ရိုက်ကူးရေးကို ၇ ရက် နဲ ၈ ရက်မှာ နာရေး ကူညီမှုအသင်း - ရန်ုကုန် ခန်းမဆောင်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ အသင်းခေါင်းဆောင် ဒီဥက္ကာ နဲ့ဒါရိုက်တာ ၀င်းကျော့မှုးတို့ဦးစီးရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ ---ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
မစ်စတာ မူဘာရကျကို ပွနျလှတျဖို့ အမိနျ့ထုတျ
04/15/2013 09:30:06 AM
အီဂဈြ သမ်မတ ဟောငျး ဟော့စနီ မူဘာရကျ အပျေါ စှပျစှဲထား ခကျြတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး သူ့ကို ဆကျ မခြုပျထား သငျ့ကွောငျး တရားရုံး အမိနျ့ထုတျ။ open
04/15/2013 09:09:52 AM
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အညွှန်းကိန်းမြင့်မားစွာ ရှိနေသော ယခုအချိန်တွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အန္တရာယ် ပိုမို ကျရောက်နိုင်ပါသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် လတ်တလော ထိတွေ့မှုကြောင့် နေလောင်ခြင်း၊ အသားအရောင် ညိုလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပြီး ထိတွေ့မှု ကာလကြာသောအခါ မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း၊ အရေပြားများ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ခုခံအားကျဆင်းခြင်း၊ အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်း စသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ရန်ကုန် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ရေကစားနေသူတွေ နဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အမှတ်တရ စကားများ (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 08:51:53 AM
ရန်ကုန် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ရေကစားနေသူတွေ နဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့အမှတ်တရ စကားများ - ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
Update Ornagai Android 2.1.2
04/15/2013 08:43:11 AM
- Fixed For Frozen Keyboard Zero Width Space Problem
- Fixed Text to Speech
APK : http://cl.ly/OJWB
Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comquas.ornagai
လက်ပံတောင်းတောင် သင်္ကြန် မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 08:40:53 AM
လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် ဖျက်သိမ်းခံရတဲ့ ရွာတွေကိုယ်စား တုံရွာသစ်နဲ့ ဆည်တည်းရွာဟောင်း မှာ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ် ၂ခု ဖွင့်လှစ်ပြီး ဒေသခံတွေက ယိမ်းအကတွေ၊ သံချပ်တွေနဲ့ ဖျော်ဖြေနေပါတယ်။ဒေါ်ခင်မင်းဇော် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်၊ ရိုက်ကူး အိုင်စီဂျေ ဥာဏ်ကြီးရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ပြည်သင်္ကြန် နဲ့ ဆန်လှူပွဲ မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 08:31:11 AM
ပြည်မြို့ န၀င်းကွက်သစ် အနောက်ပိုင်းမှာ သင်္ကြန်အကြိုနေ့က သင်္ကြန်အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် သုခ စု ဆန်လှုအသင်းက အိမ်ထောင်စု ကိုးရာကျော်ကို ဆန်လှုဒါန်းပြီး ကံစမ်းမဲဖောက် အလှုပေးတာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒေါ်ခင်မင်းဇော် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး အိုင်စီဂျေရေခဲရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါပြည်သင်္ကြန် နဲ့ ဆန်လှူပွဲhttp://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
ဗုဒ်ဓ ဘာသာဟာ လူ့ အခှငျ့ အရေးကို အခွခေံတယျလို့ ဒျေါစုပွော
04/15/2013 08:08:22 AM
ဂပြနျ နိုငျငံ တတိယမွောကျနေ့ ခရီးစဉျ မှာ ကြိုတိုက မွနျမာ မိသားစုတှကေို တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး တက်ကသိုလျ နှဈခုကို သှားရောကျခဲ့ ပါတယျ။ open
သာဓုပါဗျာ သံဂျပ်အဖွဲ့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 08:07:33 AM
မေတ္တာ၊ ကုသိုလ်နဲ့ ဗေလုဝတို့ပါဝင်တဲ့ သာဓုပါဗျာသံချပ်အဖွဲ့ဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့တွင် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့က သံချပ်ထိုးပြီး သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ Photo : RFA/ Kyaw Htoon Naing ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မန္တလေးမြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 07:56:21 AM
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မန္တလေးမြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ တောင်ကြီးမြို့ မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 07:46:01 AM
သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ တောင်ကြီးမြို့ မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
ထားဝယ် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)
04/15/2013 07:32:18 AM
ထားဝယ် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မြင်ကွင်း (ရုပ်/သံ)ရုပ်/သံ ကြည့်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး မဟာသင်္ကြန် ရေသဘင်ပွဲတော် ပါဝင်ဆင်နွဲ
04/15/2013 03:19:16 AM
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း တို့သည် ယနေ့ (အတာသင်္ကြန် အကျနေ့) open
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အတာသင်္ကြန် နှစ်သစ်ကူး မိန့်ခွန်း
04/15/2013 03:00:18 AM
ယခုကဲ့သို့ အတာသင်္ကြန် နှစ်သစ်ကူး အခါသမယမှာ မြန်မာနိုင်ငံ open
ကံ အကောင်းဆုံး လူသား
04/15/2013 02:46:36 AM
အကယ်လို့ သင်ဆာတဲ့အချိန် စားနိုင်တဲ့ အစားစာတွေ သင့်မှာရှိမယ်ဆိုရင်... သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဝတ်စရာ အဝတ် ရှိမယ်ဆိုရင်... သင့် ဦးခေါင်းထက်မှာ အမိုး ရှိမယ်ဆိုရင်... သင်မှာ အိပ်စရာနေရာ တစ်ခု ရှိမယ်ဆိုရင်.... သင်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ၇၅ % သော လူတွေထက် ပို ချမ်းသာပါတယ်...
အကယ်လို့ သင့် ဘဏ်စာရင်းမှာ ပိုက်ဆံရှိမယ်... သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ အကြွေ နည်းနည်းရှိမယ်... ပြီးတော့ သင်သွားချင်တဲ့ နေရာကို သွားနိုင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၈ % သာရှိတဲ့ လူချမ်းသာတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်...
အကယ်လို့ ဒီကနေ့ မနက်ခင်းကို မဖျားမနာဘဲ ကျန်းကျန်းမာမာ နိုးထလာမယ် ဆိုရင် သင်ဟာ ဒီရက်သတ္တပတ်အတွင်း အသက် ဆက်မရှင်နိုင်ဘဲ သေဆုံး သွားကြတဲ့ လူ သန်းပေါင်းများစွာထက် ကံထူးသူဖြစ်ပါတယ်.....
အကယ်လို့ သင်ဟာ စစ်မြေပြင်ရဲ့ အန္တရာယ်ကို လုံးဝ မတွေ့ကြုံဖူးခဲ့ဘူး... နှိပ်စက် ညှင်းပမ်းခံရတာနဲ့ ထောင်သွင်း ချုပ်နှောင် ခံရတာတွေရဲ့ သောကဗျာပါဒကို လုံးဝမရခဲ့ဖူးဘူး... စူးရှ ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့ ဆာလောင် ငတ်မွတ်မှုတွေကို လုံးဝ မတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးဘူးဆိုရင်... ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ... ဝေဒနာတွေကို လက်တွေ့ ခံစားနေရတဲ့ လူပေါင်း သန်း ၅၀၀ ထက် သင် ပိုကံကောင်းပါတယ်...
ဒီစာကို သင် တကယ်ဖတ်နေတယ်... ပြီးတော့ နားလည်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ မျက်စိမမြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်.. စာမတတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်... စိတ်အခြေအနေ ပုံမှန် မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီစာကို လုံးဝ မဖတ်နိုင်တဲ့ လူပေါင်း ၃ ဘီလီယံထက် ပိုပြီး ကံကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်...
ဘဝဆိုတာ နာကျင် ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ ညည်းညူနေစရာ မဟုတ်ပါဘူး... လက်ရှိ အခြေအနေကို တန်ဖိုးထားလက်ခံပါ... လောကကြီးမှာ သင့်ထက် အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်... ညည်းတွား မှိုင်တွေနေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘဝ တိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ပါ... လက်ရှိအချိန်မှာ လက်ရှိ အခြေအနေမျိုးကို ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက် ....
(နှိုင်းရင့်နွေ Facebook မှ) open
04/15/2013 01:02:32 AM
လူလတ်ပိုင်းရောက်လာသူပီပီ ဆရာကန်တော့ပွဲနှင့်မစိမ်းသလို တက်ဖူးသော ဆရာကန်တော့ပွဲပေါင်း က မရေမတွက်နိုင်သော်လည်း ဒီတစ်ကြိမ်ဆရာကန်တော့ပွဲကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အတော် ထူးခြားနေသည်။ ထူးဆို အရင်အကြိမ်များက ကိုယ်က ကန်တော့ရသည့်ပွဲ၊ ဒီတစ်ကြိမ်က ကိုယ်ကန် တော့ခံရမည့် ပွဲပေကိုး။
ဆရာကန်တော့ပွဲလုပ်လျင် ကန်တော့ချိုးဖြင့်တိုင်ပေးပြီး လိုက်ဆိုကြသည်က ရည်ရွယ်ပြီးလည်း ကောင်း၊ မရည်ရွယ်ဘဲလည်းကောင်း ဆရာတို့အပေါ် တစ်စုံတစ်ရာ ပြစ်မှားကျူးလွန်မိခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ် ရန် တောင်းပန်ကြခြင်း။ ဒါဆို မပြစ်မှား မကျူးလွန်သောသူတို့ ကန်တော့ခြင်းက အဓိပ္ပာယ်မဲ့လေသ လား။ အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းပန်ခြင်းထက် ပိုလေးနက်သော ရည်ရွယ်ချက်၊ ရလဒ်တို့ ရှိကိုရှိရ မည်။
နေရာပေါ်မူတည်ပြီး အမြင်တို့ကွဲပြားသောကြောင့် မိမိအလှည့်တို့တွင် ကန်တော့စဉ်တုန်းက အလိုက် သင့် အလျားသင့်သာ ကန်တော့လိုက်သည်။ ကြည်လင်ညွှတ်နူးမှု လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း အခြား ထွေထွေရာရာ သိပ်မစဉ်းစားမိ။ ကန်တော့ခံ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ထိုင်မိတော့မှ အရင်က မမြင်မိတာတွေ မြင်လာရသည်။ မတွေးမိတာတွေ တွေးမိလာသည်။
ကျွန်တော်မြင်သည့် ပထမအချက်က စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြခြင်း။ သင်ပေးလိုက်၊ သင်ယူလိုက်ကတည်းက ဆရာတပည့်ဖြစ်သွားပြီ ဆိုနိုင်သော်လည်း ဆရာကန်တော့ပွဲက ထိုအဆက်အစပ်ကို ပိုလေးနက်စေ သည်။ ပိုခိုင်မာစေသည်။ ဆရာကန်တော့ပွဲ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆရာနှင့်တပည့်အကြား လူမှုပဋိညာဉ် စာချုပ် (social contract) ထပ်မံချုပ်ဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းမှဝေးသွားသည်မှာ ကြာမြင့်လှ ပြီဖြစ်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများလုပ်သည့် ပွဲဆိုလျှင် ထိုအဓိပ္ပာယ်က ပိုပေါ်သည်။ သင်ကြားသည့်ကာလကုန်လွန်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဆရာအဖြစ်ဆက်ရှိနေရန် ပန်ကြားသည့်သဘော၊ အသိအမှတ်ဆက်ပြုသည့် သဘောဆောင်သည်။
ကန်တော့ခံလိုက်ရသော ဆရာ၊ ဆရာမတို့ဘက်ကလည်း တာဝန်ကြီးလှသည်။ တပည့်တို့ ဦးချလိုက် တိုင်း ဦးချလိုက်တိုင်း မိမိအပေါ်သို့ ကြီးလေးသောမျှော်လင့်ချက်ကြီး တစ်ခါပြီးတစ်ခါ လာတင်လိုက် သကဲ့သို့။ ကန်တော့ခံလိုက်ရသောကြောင့် ဆရာ့ဂုဏ်နှင့် ပိုညီအောင်နေထိုင်စားသောက် သွားလာ ပြုမူရတော့မည်။ တပည့်တို့၏ ဦးချကန်တော့ခြင်းနှင့် ထိုက်တန်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ရတော့မည်။ တပည့်များကို မြေတောင်မြှောက်ပေးရန်၊ ကူညီရန် ပိုကြိုးစားရတော့မည်။ တစ်ခါဆရာဖြစ်ဖူးရုံနှင့် အမြဲထိုင်ကန်တော့ခံရသည်ဆိုလျှင် မထိုက်တန်၊ ဆရာပီသသည်ထက် ပီသအောင် အားထုတ်ရတော့ မည်။ ပိုသိ၊ ပိုတတ်၊ ပိုနှံ့စပ်အောင် ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကို လေ့လာဆည်းပူးရတော့မည်။ အကျင့် စာရိတ္တပိုင်းတွင်လည်း ပြည့်စုံသည်ထက် ပြည့်စုံအောင်၊ တတ်နိုင်လျှင် ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်အောင် အားထည့်ရပေဦးမည်။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အရည်အချင်းလည်းတက်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း မြင့်နိုင်မှသာ ဆရာအခေါ်ခံခြင်းနှင့် ထိုက်တန်လိမ့်မည်။ နောင်လာလတ္တံ့သေ၊ သင်ယူဆဲဖြစ်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတို့ ပိုမိုကိုးစားရသော၊ လေးစား ကြည်ညိုသောဆရာတုိ့ ဖြစ်ရတော့မည်။ ထိုမှသာကန်တော့ရသော တပည့်တို့ ကန်တော့ရကျိုးနပ်မည်၊ တပည့်တို့က ငါတို့ဆရာကွဟု ဂုဏ်ယူ နိုင်မည်။
တပည့်များဘက်ကရော။ ကန်တော့ဖို့ဆိုသည်မှာ အင်မတန်မှခဲယဉ်းသော အရာဖြစ်သည်။ ပုထုဇဉ်လူ သားတို့သည် မာန်မာန၊ အတ္တရှိစမြဲဖြစ်သည်။ ငါ့ထက်သာတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ငါနဲ့အဆင့်တူတော့ ရော တူနေတော့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ ငါ့ထက်ညံ့မှတော့ ဘာလို့ဂရုစိုက်ရဦးမှာလဲဟူသော ထိုမာန်မာန အမျိုးမျိုးအထွေထွေတို့ကို ချိုးနှိမ်ကာ ဦးချကန်တော့ရန်မှာ လူသားတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲသော အရာ ဖြစ်သည်။
ဆရာကန်တော့ခြင်းသည် ပညာရှာပမာသူဖုန်းစားဆိုသော သဘောတရားနှင့်လည်း ဒက်ထိဖြစ်သည်။ အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ်မရွေး မိမိအား ပညာသင်ကြားပေးဖူးသည်နှင့် ဆရာဟုအသိအမှတ်ပြုကာ ကန်တော့ခြင်းသည် ပညာရမည်ဆိုလျှင် အစွမ်းကုန်နှိမ့်ချသည့်၊ ပညာလိုချင်စိတ်ကို ဖော်ကျူးသည်။ ထိုစိတ်မျိုးဖြင့်ဆိုလျှင် တောင်းကိုမဖောက်၊ တောင်ကိုဖောက်သည့် စိန်ကျောက်ပမာ ပညာထက်မြက် သည်အထိ ပညာရှာနိုင်၊ ရနိုင်မည်မှာ သေချာသည်။
ဆရာကန်တော့ခြင်းသည် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သောသူကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ခြင်း၊ မိမိအား တစ်ကြိမ် တစ်ခါကပညာသင်ပေးဖူးသောကြောင့် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ စင်စစ်ကျေးဇူးကို သိရန်ပင်ခဲယဉ်းသည်။ တစ်ဖန် ကျေးဇူးသိလျှင်လည်း ဆပ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဆရာကန်တော့ခြင်းသည် တစ်ခါသင်ဖူး သူ့ကျေးဇူးဟု ကျေးဇူးကိုသိလိုက်သလို ဆပ်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပြုခဲ့လှ သောအမှုကို ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာကန်တော့ခြင်းသည် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ပညာအပေါ် သဘောထားကိုလည်း ဖော်ပြနေသည်။ မိမိကိုပညာတစ်စုံ တစ်ရာသင်ပေးခဲ့သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများတို့ကို ကန်တော့ခြင်းသည် ပညာကို ပူဇော်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ပညာကို မြတ်နိုးလျှင် ပညာရရန်လွယ်သည်။ မြန်မာတို့သည် ပညာကို တန်ဖိုးထားကြကြောင်း ပညာနှင့်ပတ်သက်သော စကားပုံများ အတော်များများရှိခြင်းက သက်သေခံ နေသည်။
ဆရာကန်တော့ပွဲလာ အကန်တော့ခံဆရာများ၏ တပည့်များအပေါ်တွင်ထားသည့် တညီတညွတ် တည်းသော စိတ်ကားထိုတပည့်များကို ဆရာကောင်း တပည့်ပန်းကောင်းပန်စေလိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ တပည့်များ ဆရာကန်တော့ပွဲသို့ လာနိုင်မလာနိုင်၊ ကန်တော့ခြင်း မကန်တော့ခြင်းထက် အဓိကကျ သည်က တပည့်တို့ လူချွန်လူမွန်များဖြစ်လာရေး ဖြစ်သည်။ သူတို့ပေးလိုက်သောပညာများကို အသုံး ချပြီး သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် ထူးချွန်ထက်မြက်သူများ ဖြစ်လာရေးသည် ဆရာများ၏အဓိကဦးစား ပေးသာ။ ဆရာကပင် လေးစားရ၊ ပြန်လည်ပညာယူလိုသည့် တပည့်များဖြစ်ခြင်းသည် ဆရာ၊ ဆရာမ တို့၏ ကျေးဇူးကိုအစွမ်းကုန် ပေးဆပ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တွေးနေမိသော ဆရာကန်တော့ပွဲ၏ ဂုဏ်ရည်ကို ကန်တော့သည့်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား ကန်တော့ခံဆရာ၊ ဆရာမတစ်ဦးချင်းစီက စကားပြောရသည့်အခါတွင် ကျွန်တော့်အလှည့် အရောက် ထုတ်ပြောလိုက်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကို ထိုစဉ်က ထုတ်မပြောလိုက်ရသော စကားတစ်ခွန်းကမူ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် ကိန်းအောင်း လျက်။ ကျွန်တော့်ကြောင့် ကျွန်တော့်စာသင်သားများ ဂုဏ်သာယူကြရမည်၊ အရှက်မရစေရ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ယခုထက် ကြိုးစားရပါဦးမည်။ စာရိတ္တပိုင်းရော၊ ပညာပိုင်းရော။ တစ်နည်း အကောင်းပိုင်းရော၊ အတော်ပိုင်းရော။ ယင်းသည် ဆရာကန်တော့ပွဲကပေးသော တွန်းအားပင် ဖြစ်သည်။
LIVING COLOR MAGAZINE
No.213, APRIL, 2013. open
ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ ဒေါ်စု မိန့်ခွန်းပြောမည်
04/15/2013 12:55:35 AM
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျိုတို တက္ကသိုလ်မှာ ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့မှာ မိန့်ခွန်းပြောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 1985 ခုနှစ်ကနေ 1986 ခုနှစ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဧည့်ပညာရှင်အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ Kyoto မြို့ကို တနင်္ဂနွေနေ့ထဲက ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံစဉ်။ (ဧပြီလ ၁၃ ၇က်၊ ၂၀၁၃)။http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
မြို့ နယ် ဆေးရုံ လစ်လျူရှု့ မှုကြောင့် အသက်တချောင်း ဆုံးရှုံး
04/15/2013 12:50:18 AM
မုံရွာခရိုင်၊ ချောင်းဦးမြို့၊ ချောင်းဦး မြောက်ရပ်ကွက်နေ ဦးကျော်ဆွေ + ဒေါ်အေးခိုင်တို့၏သမီး မဇင်မာအောင်(ခ) မဘုတ်ဆုံသည် ၁၂.၄.၁၃ ရက်နေ့ ညနေ (၅)နာရီအချိန် ယာခင်းတွင် ငရုတ်သီးဆွက်နေစဉ် မြွေပွေးကိုက်ခံရသဖြင့် ချက်ချင်း ချောင်းဦးမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ကုသခဲ့ပါတယ်။ ---သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ
04/15/2013 12:36:20 AM
မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရအနေနဲ့ နျူးကလီးယား လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး အတွက် ဦးတည်မယ့် ခြေလှမ်းတွေကို လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ တင်းမာမှုတွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ က ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ (ဧပြီလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၃)။http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV open
ကျောင်းသူများကို စကတ်လှန်ခိုင်းသည့်ဆရာအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ
04/15/2013 12:36:16 AM
ကျောင်းသူများကို ဝတ်ဆင်ထားသည့် စကတ်အားလှန်ခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကာ အင်တာနက်ပေါ်တွင် တင်ထားသည့် ဆရာအား ဖမ်းဆီးအရေးယူသည့်ပြစ်မှုတစ်ခု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် ကိုဝက်တာကောင်တီမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုဆွဲခန့်ကျောင်းဆရာသည် ကျောင်းသူများကို မဖွယ်မရာလုပ်ခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံများကို သူပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ် တွင် တင်ထားခဲ့သည်။ ကျောင်းသူလေးများမှာ အိစ် ကိုဝက်တာအထက်တန်းကျောင်းမှဖြစ်ပြီး မဖွယ်မရာ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးသည့်သူများ၏ မဖွယ်မရာ ကိုယ်ဟန်ပြနေသည့်ပုံများကို အများပြည်သူသို့ ဖော်ထုပ်ပြရန် ဥပဒေ အရ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။
ထိုကျောင်းသူများသည် မည်သူတို့ဖြစ်ကြကြောင်းကို အတန်းဖော်များက ကောင်းစွာသိကြပြီး ဆရာအားကန့် ကွက်သည့် အီးမေးလ်များ ကျောင်းသို့အဆက်မပြတ်ရောက်လာကာ ဆရာကို အရေးယူပေးရန် တောင်းဆိုကြ သည်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း ယခုဖြစ်ပျက်မှုသည် ကျောင်းအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်ပြီး အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးပါမည်ဟု မီဒီယာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောင်းအုပ်ကြီးသည် အဖြစ်အပျက်ကို သိသိချင်း ရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ထိုဆရာကိုလည်း ကျောင်းမှထုတ်လိုက်ပြီး၊ ကျောင်းအတွင်းသို့ လုံးဝမလာရောက်ရန် အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်။
ကျောင်းသူများ၏ ဓာတ်ပုံတွင် “ကျွန်တော့်အတန်းမှ ခပ်ဟော့ဟော့ ကောင်မလေးများ” ဟု စာတန်းရေးထိုး ထားသည့်အပြင် “စကတ်လန်ကောင်မလေးများ” ဟုဖော်ပြထားချက်များအပေါ် မိဘများက အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
မိဘတစ်ဦးက “ကျွန်မတို့အနေနဲ့ ကျောင်းကို ယုံကြည်ပြီး သားသမီးတွေကို အပ်နှံထားခဲ့တာ။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ရောက်အောင် ဆရာကလုပ်တယ်ဆိုတာ အံ့သြလို့မဆုံးဘူး” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောင်းမှတာဝန်ရှိသူများက ဆရာ၏အမည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းမရှိပေ။ ရဲစခန်းမှ ထိုဆရာအားဖမ်းဆီးထား ကြောင်းသိရသည်။ open
စိတ်ဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ရိုက်နှက်ပြီး ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို အင်တာနက်ပေါ်တင်သည့် မိန်းကလေးတစ်စုဖမ်းမိ
04/15/2013 12:26:10 AM
စိတ်ဝေဒနာသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားသည့် ဗီဒီယိုကို အင်တာနက်ပေါ်တင်ခဲ့သည့် မိန်းကလေးတစ်သိုက်ကို ဖမ်းဆီးရမိသည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု အမေရိကန်နိုင်ငံ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုသို့ရိုက်နှက်နေသည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကို Facebook ပေါ်တွင် တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးက ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ထိုမိန်းကလေးများ၏ လုပ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်းပေးပို့ခဲ့သည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး မိန်းကလေး ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသည့် မိန်းကလေး ၄ ဦးသည် အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီး အများပြည်သူကို နှောင့်ယှက်မှု၊ မဆင်မခြင် ထိခိုက်စေမှု၊ ခိုးမှု၊ လုယက်မှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် နှစ်ဦးကို မကြာသေးမီကမှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုမိန်းကလေးများသည် အိမ်လှေခါးတွင် ထိုင်နေသည့် စိတ်ဝေဒနာရှင် အမျိုးသမီးကြီးကို ဖိနပ်များချွတ်ကာ ရိုက်နှက်သည့်အပြင်၊ ကုလားထိုင်ဖြင့်ပါ ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ နှိပ်စက်ရိုက်နှက်နေခြင်းဖြစ်ရပ်အားလုံးကို မနီးမဝေးရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လုံခြုံရေးဗီဒီယိုက အစအဆုံး မှတ်တမ်းယူထားခဲ့သည်။
ရိုက်နှက်ခြင်းခံရသည့် အမျိုးသမီးကြီးသည် အသက် ၄၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူလည်းဖြစ် သည်။ သူမသည် ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မိန်းကလေးများက ဖမ်းဆီးတုတ်နှောင်ကာ အဆက် မပြတ် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးက ဖြစ်ရပ်အား ဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်နေသည်ကိုလည်း လုံခြုံရေး ကင်မရာမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယခုဖြစ်ရပ်သည် လူတစ်ယောက်ကို နာကျင်အောင်လုပ်သည်ဆိုခြင်း ထက်ပိုသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိ ဂျိမ်းစ် နိုလန်ကပြောကြားသည်။
မိန်းကလေးများသည် သူတို့မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ဗီဒီယိုပြကွက်ကို Facebook ပေါ်တင်ပြီး ကြွားလုံးထုတ် ကာ ဂုဏ်ယူခဲ့ကြသည်။ ရဲမှူးနိုလန်က ဤနည်းဖြင့် သူတို့ကို လူသိများစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စိတ်ရောဂါသည် အမျိုးသမီးကို ဆေးဝါးများကုသပေးနေပြီး မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ open
နီရူဒါ ရုပျအလောငျး ပွနျစဈမယျ
04/14/2013 02:59:19 PM
ခြီလီ ကဗြာ ဆရာကွီး နီရူဒါရဲ့ ရုပျအလောငျးကို တူးဖျော စဈဆေးမယျ open
04/14/2013 01:44:38 PM
ရှနျဟိုငျး ဂရောငျးပရီနဲ့ အဖျအဖေလား အကွို ဗိုလျလုပှဲအကွောငျး သုံးသပျခကျြမြား open
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နှဈသဈကူး ပှဲတျော
04/14/2013 12:22:15 PM
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နှဈသဈကူး ပှဲတျော open
ဝငျးဖလှေယျအိတျ ထဲက ဦးသိနျးဖမွေငျ့
04/14/2013 11:27:16 AM